Fomba 5 mampientanentana ny fahombiazan'ny varotra miditra | Martech Zone
Alahady 7 Febroary 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Rehefa miteny isika Video nanjary ampahany lehibe amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy manao vazivazy izahay. Mijery horonantsary an-tserasera isan'andro amin'ny solosaina, telefaona ary koa amin'ny fahitalavitra Smart isika. Araka ny Youtube, ny isan'ny ora lanin'ny olona amin'ny fijerena horonantsary dia tafakatra 60% isan-taona!
Ireo tranonkala mifototra amin'ny lahatsoratra tsy misy afa-tsy efa lany andro, ary tsy izahay irery no milaza izany: Google dia! Ny motera fikarohana # 1 manerantany dia manome laharam-pahamehana ny atiny video, izay misy 53x vintana bebe kokoa ny fisehoana amin'ny pejy voalohany noho ny tranokala miorina amin'ny lahatsoratra. Araka ny Fanadihadiana amin'ny fironana an'ny Cisco, amin'ny taona 2018 dia hahatratra 79% ny fivezivezena amin'ny Internet ny horonan-tsary, miakatra amin'ny 66% ankehitriny. Ny orinasa dia tsy maintsy omanina hatramin'ny firoboroboan'ny horonantsary an-tserasera tsy hihena tsy ho ela.
Mifanaraka amin'ity tranga ity, horonan-tsary manazava nanjary ny icing amin'ny mofomamy misy paikady marketing amin'ny Internet. Isan'andro dia mihabetsaka ny orinasa (marika lehibe na fanombohana) no mampiasa horonantsary amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo marketing, noho ny fahombiazany amin'ny fiovam-po sy ny metatra click-to-rate, ankoatry ny tombontsoa ara-barotra maro hafa.
Inona no atao hoe Video Manazava?
An Video fanazavana dia horonantsary fohy manazava ny hevitry ny orinasa amin'ny alàlan'ny tantara an-tsary. Raha sarina teny arivo ny sary dia mitentina an-tapitrisany ny horonan-tsary - manome fitaovana mampiala voly ahafahan'ny mpitsidika mahatakatra tsara ny vokatrao na serivisinao.
Ity misy horonantsary manazava farany izay novolavolainay tao amin'ny Cord Blood Banking, lohahevitra somary sarotra natao tsotra tamin'ny fampiasana horonantsary manazava:
Misy karazana horonan-tsary manazava rehetra azo alaina - manomboka amin'ny horonantsary fotsy tsotra mankany amin'ny sarimiaina 3-D sarotra. Ity misy topy topimaso momba ireo karazana horonantsary manazava.
Nahoana no horonantsary manazava manisy fiovana amin'ny fampielezan-kevitra miditra anaty varotra? Andao hanaraka ny dingana mahazatra amin'ny marketing any anaty hahitana ny fomba a Video fanazavana afaka manatsara ny ezaka ara-barotra ataonao amin'ny fampiasana angona tena izy:
Lahatsary fanazavana no manintona ireo mpitsidika ny tranonkalanao
Ny iray amin'ireo olana lehibe ateraky ny ankamaroan'ny orinasa an-tserasera dia ny fomba hisarihana mpitsidika an-tserasera vaovao amin'ny tranokalany, amin'ny teny hafa, ny fomba filaharana amin'ny pejy voalohany amin'ny Google. Fantatray fa ny horonan-tsary na pejy misy horonan-tsary dia manana vintana tsara kokoa ho laharana amin'ny pejy voalohany amin'ny valin'ny fikarohana noho ny pejy miorina amin'ny lahatsoratra. Raha tsorina, mora kokoa ny mandevona sy mizara azy ireo - mahatonga azy ireo hanana atiny tonga lafatra hanatsarana ny laharana ankapobeny.
Ny horonan-tsary dia fitaovam-piadiana tsy miafina ho an'ny SEO (fanatsarana ny motera fikarohana). Ny filozofian'i Google dia efa hatry ny ela no nahita ny atiny an-tserasera mahasoa sy mahaliana indrindra ho azy ireo; ary fantany fa ny mpikaroka dia tia horonan-tsary afaka mampiala voly sy mampianatra. Izany no antony anomezan'i Google valisoa fahendrena ireo vohikala amin'ny alàlan'ny famoahana azy ireo ambony. Ny motera fikarohana dia mihevitra ny horonan-tsary ho iray amin'ireo endrika mahaliana indrindra amin'ny atiny an-tserasera ary mikendry ny hanome fahafaham-po ny mpampiasa azy amin'ny fampisehoana matetika ny horonantsary voalohany amin'ny valin'ny karoka. Tsy mahagaga raha nividy Youtube i Google, ilay tambajotra sosialy namboarina tamin'ny horonan-tsary, izay no motera fikarohana # 2 be mpampiasa indrindra eto an-tany ihany koa.
Tombony iray hafa amin'ny horonan-tsary marketing manazava ny azy ireo fizarana. Ny horonan-tsary no atiny mora indrindra an-tserasera hitombo amin'ny media sosialy, miaraka amina 12x tombony betsaka kokoa azo zaraina noho ny rohy sy ny fehezan-tsoratra mifangaro. Mizara horonan-tsary miisa 700 isa-minitra ireo mpampiasa Twitter, ary amin'ny Youtube dia maherin'ny 100 ora ny horonan-tsary nakarina tamin'ny ora mitovy.
Araka ny Facebook, maherin'ny 50% ny olona miverina amin'ny Facebook isan'andro any Etazonia no mijery horonan-tsary iray farafahakeliny isan'andro ary 76% ny olona any Etazonia izay mampiasa Facebook no milaza fa mirona hahita ireo horonan-tsary jereny ao amin'ny Facebook. Amin'ny fananana horonantsary mpanazava eo amin'ny tranokalanao, ny fahafahanao ho hita sy zarain'ny mpihaino kendrena dia mihatsara kokoa rehefa mampiasa horonan-tsary.
Andraso fa mbola misy hafa.
Ny horonantsary manazava dia manova ireo mpitsidika ho lasa mpitarika
Ok, rehefa nampitombo ny fitsidihanao tamin'ny horonantsary manazava ianao, ahoana no ahafahanao mamadika ireo mpitsidika ireo ho mpitarika? Ny horonan-tsary manazava dia mamela ny marikao alefaso ny pitch tonga lafatra isak'izao mihetsika izao. Ary ny fotoana dia singa iray lehibe. Ny salanisan'ny sain'ny olombelona amin'ny tranokala miorina amin'ny lahatsoratra mahazatra dia manodidina ny 8 segondra, ambany noho ny halaviran'ny sain'ny trondro volamena! Raha te hisarika ny fahalianan'ny mpitsidika anao, dia mila mandefa ny hafatrao haingana sy mahomby ianao. Tsy hoe manintona azy ireo fotsiny fa mahatonga azy ireo hijanona elaela ihany koa hahatakatra ny tolo-kevitr'orinasao.
Lahatsary iray mpanazava napetraka eo ambonin'ny vala amin'ny pejy fitorianao no mitombo ny fitsidihana manomboka amin'izany 8 segondra voalohany hatramin'ny 2 minitra antonony. Fisondrotana 1500% izany amin'ny fifamofoana! Ary ampy ny fotoana hampitan'ilay horonan-tsary ny hafatrao ary handroahana ny mpihaino anao handray andraikitra. Ny fampiasana antso-to-hetsika mahomby ao anatin'ny horonan-tsarinao dia ahafahan'ny mpitsidika misoratra amin'ny alim-baovao, misoratra anarana amin'ny fitsarana maimaimpoana, mangataka fakan-kevitra, na misintona e-book. Ny video dia mamadika ny mpitsidika ho mpitarika mahay.
Tena hividy ny vokatrao na serivisinao ve ireo fitarika ireo noho ny an horonantsary mpanazava?
Ny horonan-tsary manazava dia mamadika ny mpanjifa
Efa nohazavainay mazava tsara ny fomba mahasarika mpitsidika ireo horonan-tsary mihetsika sy mamadika azy ireo ho mpitarika, noho izany dia tonga amin'ny isa vokany izay manandanja indrindra amin'ny orinasa an-tserasera rehetra izahay: varotra.
Ny horonantsary mpanazava dia fananana manana fahaizana mampihena ny fatiantoka mety hanjifa-mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampitomboana sy fitazonana ireo mpitsidika ary mitarika isa hatrany hatrany mandritra ny dian'ny marketing any anaty. Fa ahoana no anaovany azy? Eny, ny herin'ny horonantsary manazava dia mety hahatratra ny mpihaino anao amin'ny sehatra maro be! Ireto misy ohatra:
Great fitantarana sy sary ataovy tadidio ny mety ho mpanjifanao ny tolo-kevitry ny orinasanao: amin'ny antsalany, ny olona dia mahatadidy 10% ny angona maso 3 andro aorian'ny ary hatramin'ny 70% amin'ny fampahalalana audiovisual (fikarohana any amin'ny Oniversiten'i Western Ontario). Ny zava-misy dia manondro fa 64% ny mpitsidika ary Ny 85% amin'ireo mpividy an-tserasera dia mety hividy vokatra na serivisy raha afaka mijery horonantsary manazava izany mialoha.
Tarehin-tsoratra be fitiavana dia hahatonga ny mpihaino hifandray amin'ny marikao amin'ny ambaratongam-pientanam-po lalina kokoa.
Marketing amin'ny mailaka paikady marketing iray hafa izay azo hamafisina amin'ny fametrahana horonantsary: ​​mahazo ny tahan'ny click-through a Fiakarana 100% amin'ny salanisa ary na dia e-mail aza miaraka amin'ny teny fotsiny Video ao amin'ny andiany hampiakarana ny tahan'ny fisokafan'izy ireo hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 13%.
Antsasaky (52%) an'ny matihanina amin'ny marketing manonona izao tontolo izao ny horonantsary toy ny atiny an-tserasera miaraka amin'ny tambiny fampiasam-bola tsara indrindra.
Fandinihana tranga an-tsarimihetsika
Crazy Egg, ny serivisy noforonin'i Hiten Shah sy Neil Patel, nampitombo ny fiovam-po tamin'ny 64% ary nahazoana vola 21,000 XNUMX $ fanampiny isam-bolana rehefa nametraka horonantsary mpanazava mihetsika ao amin'ny pejin'izy ireo izy ireo. Ity ny lahatsarin'izy ireo:
Dropbox namoaka fiakarana fiovam-po 10% tamin'ny horonantsarin'izy ireo manazava, ka nahazoany vola mitentina 50 tapitrisa dolara tamin'ny 2012 fotsiny. Mahagaga, huh?
Ny horonantsary manazava dia mamadika ny mpanjifa ho mpanentana
Ka eo amin'ny dingana farany isika izao. Manana mpanjifa efa nividy ny vokatrao sy serivisinao ianao ary tian'izy ireo izany! Ka ahoana no ahafahan'ny horonan-tsary manazava manampy azy ireo ho mpanentana anao?
Raha tian'ny mpanjifa ny vokatrao sy ny serivisinao (ary maninona no tsy izy ireo, marina?), Dia mety hizara ny horonantsary manazava anao amin'ny tambajotra sosialy toa ny Facebook, Twitter na Youtube koa izy ireo, ary manaparitaka izany any amin'ireo namany sy mpiara-miasa aminy (don saro-kenatra izy ireo, ary angataho izy ireo mba hizara izany koa).
Ny horonantsary manazava no singa atiny azo zaraina betsaka indrindra amin'ny Internet, ary izany no mahatonga azy ho fananana tonga lafatra ho an'ny mpanjifanao hampiroborobo anao amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy. Ohatra, ity misy horonantsary manazava izay nahatratra 45 ny fitsidihana tao amin'ny Youtube fotsiny:
Ny horonan-tsary manazava dia fananana manova ny mpanjifanao ho lasa vondrom-piarahamonina! Hitanay fa ny marketing amin'ny vavan'ny vava dia iray amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny varotra an-tserasera - ary ny fanomezana horonantsary ho an'ny mpanjifanao mizara ny momba ny orinasanao dia manome azy ireo hizara sy hanohana anao haingana sy mora.
Jereo ny portfolio-nay Makà teny nalaina manokana
Na dia mihoatra ny lahatsoratra fotsiny aza ny fampiasam-bola, na infographic na taratasy fotsy sarotra aza, dia azo ampiasaina amin'ny mpampita vaovao sy amin'ny pejy maro sy pejy fidirana ao amin'ny tranokalanao ny horonantsary mpanazava. Mampifangaro ny fahaizany mamily sy mamadika ireo mpitsidika izany - manome tombony amin'ny tamberim-bola azo antoka.
Tags: horonantsary manazavamampihiditra barotrafiovam-pejyfiovam-po videohoronan-tsary amin'ny pejy fitobianaYum yum horonan-tsary
Apr 15, 2015 amin'ny 11: 51 AM
Mifanaraka amin'ny lanjan'ny horonantsary manazava aho 100%. Vao nanomboka ny orinasako aho dia manantena aho fa tsy tara loatra hiditra amin'ny orinasa 🙂
Hampiseho ny mpanjifako ho avy ity lahatsoratra ity raha manontany ahy izy ireo hoe maninona no zava-dehibe ireo horonan-tsary ireo. Misaotra!
Oct 25, 2015 amin'ny 12: 32 AM
Lahatsoratra mahafinaritra! Ny hany zavatra banga dia sosokevitra iray amin'ny fomban-dahatsary tokony halehan'ny olona iray miankina amin'ny vokatra na serivisy ezahany hampiroborobo. Ohatra, ahoana no ahafahan'ny olona manapa-kevitra ny handeha amin'ny sary mihetsika 2D fisaka - toa ity iray ity https://www.youtube.com/watch?v=liGvS4j0lKI na ho an'ny sary mihetsika 3D - tahaka ity iray ity https://www.youtube.com/watch?v=Q6cx_MJ9nsA ? Inona avy ireo mason-tsivana tokony hitarika ny safidintsika?
25 Okt 2015 amin'ny 1:41 PM
Tsy azoko antoka fa ny refy dia manan-danja toy ny script. Ny Animation dia ahafahanao mitantara tantara iray amin'ny fomba itiavanao azy holazaina - nefa tsy manam-potoana sy fandaniana amin'ny fananganana seho, mpilalao sarimihetsika, sns. Hanampy aho fa ny sarimiaina 3D, raha tsy vita tsara dia tsara dia mety ho toa tsy matihanina. Mampalahelo fa efa fanaon'ny Pixar ny sarambabem-bahoaka sy ny sarimiaina 3D avo lenta… raha tsy azonao ampifanarahana io kalitao io dia mety tsy hahomby.
Aug 27, 2017 amin'ny 10: 46 AM
Ahoana no fomba hampiasako azy io amin'ny ivon-toeram-piantsoana mifamatotra izay hiantsoan'ny prospect.
Ahoana no fomba hampivelaranao ny scrips mety ary hisy ny mpanjifa na orinasa hanao ny orinasa matotra amin'ny sary mihetsika mifanohitra amin'ny famokarana tena fiainana miaraka amin'ireo mpisehatra